(एसइई) को नतिजा प्रकासीत, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा! - Nepal News - Latest News from Nepal
(एसइई) को नतिजा प्रकासीत, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा!
भक्तपुर, २ असार ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रुपान्तरित माध्यमिक शिक्षा परीक्षाअर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा आज बिहान सार्वजनिक गरेको छ ।
महिलाको स्तनलाई सुडौल बनाउनका लागि के गर्ने
सोमबार बसेको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस